Abekho Abalukiwe Bezindwangu - China Abekho Abalukiwe Bezindwangu Abakhiqizi, Abahlinzeki
Ibhizinisi lethu ligcizelela yonke inqubomgomo ejwayelekile "yomkhiqizo osezingeni eliphakeme isisekelo sokusinda kwebhizinisi; ukwaneliseka kwamakhasimende kungaba yindawo ebukekayo nokuphela kwebhizinisi; ukuthuthuka okuqhubekayo ukuphishekela abasebenzi" kanye nenhloso engaguquguquki "yedumela kuqala , iklayenti kuqala "for None Woven Fabric,,,, Samukela ngobuqotho amakhasimende avela ekhaya nakwamanye amazwe ukuthi azoxoxisana ngebhizinisi nathi. Ngobuchwepheshe obuthuthukile nezinsizakusebenza, ukuphatha okuhle kwekhwalithi enhle, isilinganiso esifanele, usizo oluphakeme nokubambisana okuseduze nabathengi, besizinikele ekunikezeni inani elingcono kakhulu labathengi bethu ku-None Wo Fabric, Ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu yomkhiqizo ngokukhetha okuhle kakhulu abahlinzeki, futhi sisebenzise izinqubo eziphelele zokulawulwa kwekhwalithi kuzo zonke izinqubo zethu zokutholwa. Okwamanje, ukufinyelela kwethu uhla olukhulu lwezimboni, kuhambisana nokuphathwa kwethu okuhle kakhulu, nakho kuqinisekisa ukuthi singazigcwalisa ngokushesha izidingo zakho ngamanani amahle kakhulu, kungakhathalekile usayizi we-oda.
incazelo: isisindo. I-25 gsm 35 gsm 50 gsm 60 gsm 70 gsm 80 gsm noma ngokwe-oda
Ukupakisha: ukupakisha kumaroli.
(umthamo): 300TON / Inyanga
Ukulethwa kwembobo: Noma iyiphi ichweba laseChina
sebhithi: 30 gsm 40 gsm 50 gsm 60 gsm 70 gsm 80 gsm noma ngokuya nge-oda.
Umbala: zonke izinhlobo zombala nesisindo.
Ukupakisha: ukupakisha kumaroli, amabhali, amabhokisi.
产 能 (umthamo): 400TON / Inyanga
Ukwakheka: Polypropylene100% + PU
Ububanzi: 60 ”
sebhithi: 60 gsm, 70 gsm noma ngokuya nge-oda.
umthamo: 40TON / Inyanga
Inzuzo: Intengo Engcono kakhulu, ikhwalithi nensizakalo, ukusabela okusheshayo, ukulawula okuhle kwekhwalithi.
Imikhiqizo yethu ithunyelwa e-Europe, American, Southeast Asia, Korea, Japan, ukukhiqizwa kokuvuthwa, ukuthengisa nokuthunyelwa kwethimba, okungasebenzisa esibhedlela, isikhungo sesayensi, inkambu yezimayini, njll.
sebhithi: 42 gsm 50 gsm 55 gsm 60 gsm 70 gsm noma ngokuya nge-oda.
Umbala: omhlophe / oluhlaza okwesibhakabhaka / ophuzi
Ububanzi: 57-62 ”
umthamo: 80TON / Inyanga
umbala: zonke izinhlobo zombala (ngokuya nge-oda).
icacisa isisindo ngokuya nge-oda.
Ukupakisha: ukupakisha kumarolls noma ukusika.
Amandla: 400TON / Inyanga
Delivery PORT: Noma iyiphi ichweba laseChina
umthamo: 400TON / Inyanga